Tresaka Archives - Page 3 sur 136 -
Mbola lavitry ny afo ny kitay raha ny fanangonan’ny CENI ny voka-pifidianana manerana ny Nosy. Mbola tsy nahavita akory ny 50% n’ny biraom-pifidianana ity sampandraharaha ity hatreto. Ankehitriny anefa dia efa misy sahady no mirehareha …Tohiny
20/12/2018 admintriatra 0
Nanamarika ny androm-pifidianana omaly ny nahitana ireo fikasana hangala-bato tamin’ny toerana maromaro teto Madagasikara. Io moa le efa notenen’ingahy Rajoelina hoe « Tsy maintsy lany », dia nataony ny fomba rehetra tsy maintsy ahalany azy, …Tohiny
«Veloma farany !»
18/12/2018 admintriatra 0
Hanefa ny adidy masina ny olom-pirenena rahampitso alarobia faha-19 desambra, ary hanao “veloma farany” eto amin’ny tantaran’i Madagasikara ireo mpanongam-panjakana sy ny forongony. Tsy amin’ny alalan’ny basy na lakrimôzena no hamafana ny anaran’izy ireo, fa …Tohiny
«Mividy olona !»
17/12/2018 admintriatra 0
Voaporofo izao fa tena mividy olona mihitsy i Andry Rajoelina sy ny TGV ary ny MAPAR. Efa manaiky ny fahareseny any amin’ny fara-hatoka any izy ireo, ka tsy te handany vola intsony dia naleony nanao …Tohiny
Efa tsy rariny intsony mihitsy. Tapitra potika sy simba ny lalana eto an-dRenivohitra ankehitriny. Toa mitazam-potsiny ny zava-misy anefa ny eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra fa tsy mandray ny andraikitra tandrify azy. Efa tsy ...Tohiny